Ciidamada Jubbaland oo loogu baaqay in ay isku soo dhiibaan DF | Keydmedia
Ciidamada Jubbaland oo loogu baaqay in ay isku soo dhiibaan DF
Maamulka gobolka Gedo ayaa ugu baaqay ciidamada Jubbaland ee ku sugan duleedka degmada Beled-xaawo, in ay hubka iska dhigaan kadibna ku soo biiraan kuwa xoogga dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cusmaan Nuur Xaaji Macalimuu Guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo ayaa ugu baaqay ciidamada Jubbaland ee ku sugan duleedka degmada Beled-xaawo in ay hubka iska dhigaan kadibna isku soo dhiibaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka.
Waxaa uu sheegay in ay soo dhweynayaan haddii aysan wax dhibaato ah wedin, isagoona intaa ku daray in ay ciidamada ka fekeraan mustaqbalkooda, ayna u ekaadaan ciidan Qaran oo dhinacooda dalka ka difaaco.
”Fadlan yaanan la’idin maran habaabin mustaqbal ayaad leedihiin niman dhaliyaro ah oo Soomaali ah ayaad tihiin walaalaheena tihiin deegaankan aad idinku filan.’’
Sidoo kale guddoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland ee ku sugan duleedka degmada Beled-xaawo, islamarkaana uu hoggaamiyo Wasiir Janan aysan sidaas xal u aheyn, deegaannadoodana ku soo laabtaan, kuna soo biiraan ciidanka xoogga dalka.
Dowladda Soomaaliya ayaa horaantii sanadkaan ciidamo ku daabushay degmooyinka gobolka Gedo, iyadoona dagaal uga saartay kuwii Jubbaland oo halkaas in ku dhow 10 sano maamulayay, waxaana lagu eedeeyay in ay gobolkaas ka abuurtay amaan darro iyo xiisad dagaal.